မီးနင္းျပျခင္း ပုလင္္းေတြ ဖန္ခြက္ေတြ စားျပျခင္းမ်က္လွည္႔ရဲ႔ အထူးလွိဳ႔၀ွက္ခ်က္္ – Latest Myanmar News
May 15, 2019 Latest Myanmar News ဗဟုသုတ 0
မယံုမ႐ွိနဲ႔ ။စမ္​းၾကည္​့ လိမ္​နည္​း ေတြပါပဲ။ ၁ မီးရဲရဲ​ေပၚ. လမ္​းျဖတ္​​ေလ်ွာက္္​ရန္​ ​ေက်ာက္​ခ်ဥ္​ရယ္​ သဲဆပ္​ျပာ/​ေရႊဝါဆပ္​ျပာ
၁ မီးရဲရဲ​ေပၚ. လမ္​းျဖတ္​​ေလ်ွာက္​ရန္္​ ​ေက်ာက္​ခ်ဥ္​ရယ္​ သဲဆပ္​ျပာ/​ေရႊဝါဆပ္​ျပာ ဆတူ/အမ်ွ​ေဖ်ာ္​ ။လိမ္​း။လိမ္​းထားတဲ့​ေနရာမွန္​သမ်ွ မီးမဟပ္​ /မီးမပူ ။
၂ ထံုးကို အ႐ုပ္​စုံ ထုလုပ္​ထား ။ က်ီးကန္​းသည္​း​ေျခကို ႀကိမ္​လံံုးထိပ္​ သုတ္​လိမ္​းၿပီး ထံုး႐ုပ္​ကို တို႔လိုက္​တာနဲ႔. မီးထ​ေတာက္​၏ ။
၅။ပုလင္​း​ေတြ ဖန္​ခြက္​​ေတြ ဝါးတဲ့နည္​းပါ ။ ဒါက​ေတာ့ ဟင္​းႏုႏြယ္​္
weeks ျပဳတ္​ ။
ဝါးမဲ့သူကလဲ အစာမခံထားဘဲ 7weksတိုင္​ ၄င္​း ဟင္​းႏုႏြယ္​သတၳဳျပဳတ္​ရည္​​ေသာက္​။ စား ၿပီးမွ ဝါးရပါတယ္​။
ျပဳတ္​သားဝ​ေနမွသာ ပါးစပ္​ထဲ​ေရာက္​သည္​ႏွွင္​့ အရည္​​ေပ်ာ္​သြားစျမဲပါ ။ လ်ွာ/အာ ထိခိုက္​ပြန္​းပဲ့ နာက်င္​ျခင္​းမ႐ွိတာ ဒီနည္​း ျဖစ္​ပါတယ္​ ။
၇။ျမင္​းအသဲကို သံပုရာရည္​ နဲ႔စိမ္​ ။အလိပ္​ျဖစ္​​ေအာင္္​ ​ေသး​ေသး​ေလး​ေတြလုပ္​ ။ အ​ေျခာက္​လွန္​း။ပ​ေယာဂ. ႐ွိသည္​ဆိုကာ ​ေသြး​ေဆးနဲ႔​ေရာတိုက္​ ။ ဝမ္​းထဲ​ေရာက္​ သြား​ေတာ့ အႀကီးႀကီးျပန္​ျဖစ္​လာ​ေရာ​ေလ ။ အန္​​ေဆးတိုက္​​ေရာ ။ အသားစိုင္​အသားခဲ​ေတြအန္​ပါ​ေလ​ေရာ​ေလ ။ ဒီနည္​းနဲ ့အထက္​လမ္​းလိုလို ​ေအာက္​လမ္​းလိုလို ​ေဆးပ​ေယာဂလိုလို ပညာမဲ့ အသိမဲ့တဲ့လူ​ေတြဆီက​ေငြလိမ္​စား​ေနၾကတဲ့ အက်င္​့ဆိုး​ေတြပါ။
မယုံမရှိနဲ့ ။စမ်​းကြည်​့ လိမ်​နည်​း တွေပါပဲ။ ၁ မီးရဲရဲ​ပေါ်. လမ်​းဖြတ်​​လျှောက််​ရန်​ ​ကျောက်​ချဉ်​ရယ်​ သဲဆပ်​ပြာ/​ရွှေဝါဆပ်​ပြာ
မယုံမရှိနဲ့ ။စမ်​းကြည်​့ လိမ်​နည်​း တွေပါပဲ။
၁ မီးရဲရဲ​ပေါ်. လမ်​းဖြတ်​​လျှောက်​ရန််​ ​ကျောက်​ချဉ်​ရယ်​ သဲဆပ်​ပြာ/​ရွှေဝါဆပ်​ပြာ ဆတူ/အမျှ​ဖျော်​ ။လိမ်​း။လိမ်​းထားတဲ့​နေရာမှန်​သမျှ မီးမဟပ်​ /မီးမပူ ။
၂ ထုံးကို အရုပ်​စုံ ထုလုပ်​ထား ။ ကျီးကန်​းသည်​း​ခြေကို ကြိမ်​လုံံးထိပ်​ သုတ်​လိမ်​းပြီး ထုံးရုပ်​ကို တို့လိုက်​တာနဲ့. မီးထ​တောက်​၏ ။
၃ နှင်​းဆီပန်​းကို အညှာဖြုတ်​ ။ အပ်​နဲ့. အပ်​ချည်​ကိုပြဒါးစိမ်​ ။ တွဲလျှက်​သား အပ်​ချည်​ပါ အပ်​ကို ပန်​းဖင်​မှာထိုးထား ။ ပန်​းထိပ်​ကို ပြဒါးသုတ်​ ။ အ​ပေါ်က. ​ကြေးလင်​ပန်​း ထား တီးကြည်​့ ။ ထိုပန်​း ထကမည်​ ။
၄နို့ဆီဗူးက်ို အ​ပေါက်​မ​ဖောက်​ဖဲ ကုန်​တာဟာ နတ်​ဘုရားတန်​ခိုး ​ကြောင်​့မဟုတ်​ပါ ။ ပြဒါး​ကြောင်​့ပါ ။သံနဲ့. ပြဒါး ဓာတ်​ပြုမြဲမို့. သုတ်​လိမ်​းထားပြီး များမကြာမှိ ပူလာပြီး အ​ငွေ့အဖြစ်​​ပြောင်​းလဲသွာသဖြင်​့နို့ဆီများ ​ပျောက်​သွားတတ်​ပါသည်​ ။
၅။ပုလင်​း​တွေ ဖန်​ခွက်​​တွေ ဝါးတဲ့နည်​းပါ ။ ဒါက​တော့ ဟင်​းနုနွယ်​်
ဆူး​ပေါက်​ရိုးနီပင်​ပဥ္စငါးပါးနဲ့. မျက်​လှည်​့ပြမည်​့ ဖန်​ပုလင်​း​တွေကို7
weeks ပြုတ်​ ။
ဝါးမဲ့သူကလဲ အစာမခံထားဘဲ 7weksတိုင်​ ၄င်​း ဟင်​းနုနွယ်​သတ္ထုပြုတ်​ရည်​​သောက်​။ စား ပြီးမှ ဝါးရပါတယ်​။
ပြုတ်​သားဝ​နေမှသာ ပါးစပ်​ထဲ​ရောက်​သည်​နှှင်​့ အရည်​​ပျော်​သွားစမြဲပါ ။ လျှာ/အာ ထိခိုက်​ပွန်​းပဲ့ နာကျင်​ခြင်​းမရှိတာ ဒီနည်​း ဖြစ်​ပါတယ်​ ။
၆။မသိုးထမင်​း မသိုးထမင်​း ကြားဖူးမ​ပေါ့ ။ ​ထွေ​ထွေထူးထူး​တော့ မထူးပါဘူး ။ အထားခံနိုင်​​အောင်​ ချက်​ထားတာပါ ။နတ်​သုဒ္ဒါနဲ့. နှိုင်​းရတဲ့ထိ ၃ရက်​တာ မသိုး​အောင်​ စီမံထားနည်​း​လေးပါ ။ ထမင်​းကို ​တောင်​့​တောင်​့​လေးရ​အောင်​ငှဲ့ ။ ပဲဆီသို့မဟုတ်​ နှမ်​းဆီကို ထည်​့နှပ်​ ။မီး​နွေး​နွေးနဲ့. ပတ်​ချာလည်​နှပ်​ ။ပြီး ကျက်​​ရော ဝါးဆန်​​ဆေး​တောင်​းထဲ ပိတ်​စိမ်​းပါးခံပြီး ခူးထားပါ ။ ပြီး သွားလိုရာ ယူသွားရင်​ ငှက်​​ပျောဖက်​/အင်​ဖက်​နဲ့ထုတ်​။ လိုရာယူ​တော့ ။ ​ရှေးလူကြီးနည်​း​တွေ​ပေါ့​နော်​ ။
၇။မြင်​းအသဲကို သံပုရာရည်​ နဲ့စိမ်​ ။အလိပ်​ဖြစ်​​အောင််​ ​သေး​သေး​လေး​တွေလုပ်​ ။ အ​ခြောက်​လှန်​း။ပ​ယောဂ. ရှိသည်​ဆိုကာ ​သွေး​ဆေးနဲ့​ရောတိုက်​ ။ ဝမ်​းထဲ​ရောက်​ သွား​တော့ အကြီးကြီးပြန်​ဖြစ်​လာ​ရော​လေ ။ အန်​​ဆေးတိုက်​​ရော ။ အသားစိုင်​အသားခဲ​တွေအန်​ပါ​လေ​ရော​လေ ။ ဒီနည်​းနဲ ့အထက်​လမ်​းလိုလို ​အောက်​လမ်​းလိုလို ​ဆေးပ​ယောဂလိုလို ပညာမဲ့ အသိမဲ့တဲ့လူ​တွေဆီက​ငွေလိမ်​စား​နေကြတဲ့ အကျင်​့ဆိုး​တွေပါ။
အရှင်ဇာဂရ ( မနောမြေ )
အထီးက်န္္ သခ်ၤိဳင္း (သို ့) နမ္ေခ်ာင္ေဟြြ